Pokémon GO agafeelarị nde 1.000 nbudata n'ụwa niile | Gam akporosis
Pokémon GO agafeela nbudata 1.000 ijeri
Edere Ferreno | | Egwuregwu gam akporo, Pokémon Go
Pokémon GO bụ otu n'ime egwuregwu ndị kachasị ewu ewu nke afọ ndị na-adịbeghị anya na gam akporo. Agbanyeghị na mmalite ya malitere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ atọ gara aga, ọ ka bụ otu n'ime aha ahụ ọzọ revenue-enweta na ekwentị egwuregwu ahịa. Na mgbakwunye, ọ bụkwa egwuregwu kachasị ewu ewu na nso a. N'ihi na dị ka nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya si kwuo, egwuregwu Niantic bụ nke na-achịkwa nke kachasị ego nke uru nke egwuregwu na saga.
Ihe ndị a bụ data na-eme ka o doo anya na Pokémon GO bụ ihe ịga nke ọma. Ihe nwekwara ike ikwenye site na ọnụọgụ nke nbudata nke egwuregwu ahụ eruola. N'ihi na dika data ohuru, gafererịrị nde 1.000 nbudata n'ụwa nile. Ihe di mkpa maka Niantic.
Nke a bụ ọnụ ọgụgụ dị oke mkpa, ọ bụ ezie na ekwesighi ịkwalite eziokwu a. Onu ogugu abiala na nbudata nke Pokémon Go ma na gam akporo na iOS. Mkpokọta ha abụọ bụ ihe na-eme ka o kwe omume egwuregwu Niantic dị ka otu n'ime ndị kachasị ewu ewu maka ekwentị mkpanaaka n'afọ ndị na-adịbeghị anya. E gosipụtara ọnụ ọgụgụ a na ihe omume na Singapore, ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ akwaliteghị oge akụkọ ihe mere eme nke ukwuu. Ha nwere ike inyekwu data obere oge.
Pokémon GO na-ekwuwapụta mmelite na Ọzụzụ Ndị Ọzụzụ
Ya mere, o doro anya na saga a na-aga n'ihu na-akpali mmasị dị ukwuu gburugburu ụwa. Ihe ndekọ ndị a na-ekpughe na otu ụzọ n'ụzọ asaa nke ndị bi n'ụwa ebudatara ya na ekwentị ha. Na mgbakwunye, Niantic na-aga n'ihu ịhapụ atụmatụ ọhụrụ na egwuregwu ahụ, iji nọgide na-enwe mmasị n'aka ndị ọrụ. Ihe anyị ahụla na ihe karịrị otu oge, ma ruo ugbu a ọ dị ezigbo mma maka ụlọ ọrụ ahụ. Niantic egosighi otu esi ekewa nbudata ndị ahụ (n'etiti Android na iOS). Mana ọ ga-amasị anyị ịnweta data a n'oge na-adịghị anya.
Ọzọkwa, na premiere nke ihe nkiri onye na-achọpụta Pikachu bụ ohere ọzọ dị mma maka egwuregwu ahụ. N'ezie, emeela ihe omume abụọ maka ịtọhapụ ihe nkiri a. Yabụ na ọ bụ ezigbo mmụba maka Pokémon GO, nke nwere ike iwepụtakwu mmasị n'etiti ndị ọrụ, na gam akporo na iOS. Ebe ọ bụ na ụdị ihe ndị a na-ewetakarị akwụkwọ ọhụụ, nke na-eme ka ndị ọrụ laghachi igwu egwu otu ma ọ bụ nwekwuo ọnụnọ na mgbasa ozi maka izu ole na ole.
Ole na ole egwuregwu maka smartphones nwere ike ịnya isi na ị nweta nọmba nbudata dị ka nke a. Aha ndị ọzọ ama ama dịka Clash Royale ma ọ bụ Candy Crush enwebeghị ike iru ụdị ọgụgụ a. Ya mere, egwuregwu Niantic doro anya na ọ bụ otu ihe dị mkpa, mana nke ahụ mee ka oputara na saga a ka di ndu. N'ezie, anyị nwere ike ịtụ anya a egwuregwu ọhụrụ maka afọ ọzọ. Ọzọ, n'ihi na anyị nwere ọtụtụ dị na gam akporo.
Anyị ga-ege ntị na mgbanwe niile ga-abịa Pokémon GO ọnwa ndị a. N'ezie ụfọdụ omume ga-ahazi maka okpomọkụ. Oge mgbe ojiji egwuregwu na-achọ ịlaghachi. Ya mere, anyị ga-ahụrịrị ihe ọhụụ a na-emegharị onwe ya ọzọ na izu ndị na-abịanụ, ọ bụrụhaala na enwere ihe omume ma ọ bụ ihe ọhụụ nke mmasị si Niantic. Ọ bụ ezie na ọ dị ka ọ gwụchara na nbudata egwuregwu ahụ ga-agbapụ.
Oge ya nke kachasị ewu ewu bụ ogologo oge gara aga. Ezie na ọnụnọ nke ihe na ndozi, dị ka egwuregwu ọkụ, bụ ọrụ ndị nyeworo aka ịtụte ya, ọ bụ ezie na oge niile na-adịru nwa oge. Mana atụmatụ a na-arụ ọrụ nke ọma maka Niantic n'ime afọ abụọ gara aga. Ọ ga-adị mkpa ịhụ ọrụ ọhụrụ ha na-eme atụmatụ iwebata iji kwado egwuregwu a na-ewu ewu na ahịa.
Pokémon TCG Card Dex: Ngwa ọhụrụ maka ndị na-anakọta Kaadị Pokémon
Nwetụla mgbe ị kpọtụrụ Pokémon GO? Kedu ihe ị chere gbasara egwuregwu Niantic?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Pokémon GO agafeela nbudata 1.000 ijeri
Otu esi zoo ngwa na Xiaomi